GetFeedback: Daraasado Online ah oo Aan Waligood Sameyn | Martech Zone
Helida Jawaab Celinta: Sahannada Internetka ee Aan Hore Loo Arag
Khamiista, Diseembar 12, 2013 Douglas Karr
Haddii aad indho indhayn ku sameysay dhawaanahan, waad ogtahay sida ay u foolxun yihiin isweydaarsiga isticmaalayaasha ee aaladaha sahaminta dhaqameed. Waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ah inaad hoggaamiye ka noqoto tikniyoolajiyadda - waxaad sii wadaysaa dhisidda iyo isku-darka barxaddaada wayna sii adkaaneysaa cusbooneysiinta Waxaan sii wadaa inaan tan ku arko iyadoo la adeegsanayo aalado kala duwan - waana ku mahadsantahay wanaag inay ku dhacday sahanno. Dib-u-celinta wuxuu leeyahay jawaab celin, WYSIWYG interface oo kuu oggolaanaysa inaad abuurto sahanno qurux badan.
Waxa aad aragto waa waxa aad Hesho - 'GetFeedback' waxaad ku abuuri kartaa sahannadaada toosan khadka tooska ah, ka dibna ku dar qaabkaaga adoo ku daraya midabbo, noocyo, astaamo, iyo sawirro.
Taageerada Sawirka iyo Muuqaalka - natiijooyinka ka faa'iideysiga muuqaalka iyo fiidiyowga ee hawlgelinta qoto dheer (iyo heerarka dhameystirka sare) ee sahannada internetka.
Tixgelinta - In ka badan 50% ee sahannadaada laguma eegi doono biraawsar biraawsar ama laptop. Qalabka sahanka maanta wuxuu ubaahanyahay in loo naqshadeeyo aduunyada casriga ah, kiniiniyada iyo daalacayaasha shabakadaha waaweyn iyo yarba.
Qaybinta kanaallo badan - karti aad ugu qaybin karto sahannadaada kanaal kasta: emayl, degelkaaga, balooggaaga, ama si toos ah Facebook iyo Twitter.
Warbixinta waqtiga-dhabta ah - GetFeedback waxay kugula socodsiineysaa ogeysiisyo riix ah waxayna kuu soo gudbineysaa qalab falanqeyn aad u fara badan si aad uga faa'iideysato xogtaada.
Wadaagista Xogta - La wadaag natiijooyinkaaga isla markiiba asxaabtaada si kooxda oo dhan ay u aragto jawaab celinta, ama u soo dejiso una dhoofiso xogtaada Excel ama CSV.
Qiimaha GetFeedback wuxuu ku bilaabmaa qiime la’aan wuxuuna ku saleysan yahay adeegsiga. Qiimo dhimis ayaa loo sameeyaa lacag bixinta sanadlaha ah.
Tags: jawaab celinta macaamiishadoorashooyinka macaamiishasahaminta macaamiisha-celindoorashadasahan
Khadka Mowduuca Mowjadaha Soo Bandhigaya